Marka la eego xagga xirfadda, maqnaansho kasta waa in la sii dhiirigeliyaa oo la caddeeyaa, gaar ahaan haddii ay tahay maqnaansho aan caadi ahayn (tusaale ahaan maalin badhkeed). Maqaalkan, waxaan ku siineynaa xoogaa talooyin ah oo aad ku qorto a email cudurdaar maqnaansho.
Xaqiijinta maqnaashaha waa muhiim, gaar ahaan haddii maqnaashaha uu ku yimaado si lama filaan ah (maalmo yar uun ka hor) ama ay dhacdo maalin ay jirto wax muhiim u ah waaxdaada, sida kulan ama kulan weyn degdeg. Haddii ay tahay fasax jirro, waa inaad haysataa caddeyn caafimaad oo qiil u leh inaad jiran tahay! Sidoo kale, marka laga hadlayo fasaxa gaarka ah ee dhimashada darteed: waa inaad keentaa shahaadada dhimashada.
Qaar ka mid ah talooyin si ay u sababeeyaan maqnaansho
Si loo caddeeyo maqnaanshaha emailwaa inaad horey u bilawday adigoo si cad u dhawaaqaya taariikhda iyo waqtiga maqnaanshahaaga, sidaa daraadeed ma jiraan wax ismaandhaaf ah oo bilawga ah.
Ka dibna u xaqsoow baahida maqnaanshahaaga adoo ku dhejinaya lifaaq ama hab kale.
Waxa kale oo aad sameyn kartaa, haddii maqnaansho aad u xumaato, waxay kuu soo jeedinaysaa inaad ka sarayso beddelaad aad ku sameyso maqnaanshahan.
Halkan waxaa ah tusaale ka mid ah emaylka si loo caddeeyo maqnaanshaha:
Mawduuca: Maqnaanshaha baaritaan caafimaad awgood
Waxaan halkan kugula socodsiinayaa in aan ka maqnaan doono shaqadayda [taariikhda], galabtii, sababtoo ah waa inaan baaritaan caafimaad ku qaadaa kadib shil baaskiil.
Waxaan dib u bilaabi doonaa waxqabadka xirfadeed ee [taariikhda].
Fadlan waxaad ka heli kartaa warqadda ku saabsan ballantaada caafimaadka iyo joojinta shaqada uu bixiyey dhakhtarkeyga galabnimada [taariikhda].
Wixii ku saabsan kulanka la qorsheeyey illaa iyo hadda, Mr. So-iyo-sidaas ayaa ii bedeli doona oo ii soo diri warbixin faahfaahsan.
Email template si ay u cadeeyaan maqnaansho July 25th, 2021Tranquillus
READ Hagaajinta xirfadahaaga qorista
horeEmail template ah codsi fasax ah
socdaEmail template si ay u caddeeyaan daahitaan